Ao Azerbaijàna, mampahonena ny fahalalahan’ny media araka ny voalazan’ireo manampahaizana · Global Voices teny Malagasy
Mitotongana ny tombam-bokatra amin'ny lafiny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ao Azerbaidjàna.
Voadika ny 02 Jona 2022 2:07 GMT
Vakio amin'ny teny українська, English, Español, English
Sary an'i Matt C ao amin'ny Unsplash, nampiasaina lisansa Unsplash
Tsy mitsahatra ny miharatsy ny tarehimarika ao Azerbaidjàna mikasika ny resaka fahalalahan'ny asa fanaovana gazety nandritra ny taona maro ka hatramin'izao. Hita taratra izany eo amin'ny toeran'ny firenena ao anatin'ireo laharana mikasika ny fahalalahana amin'ny asa fanaovana gazety sy anatin'ireo fitantaràna manokana ataon'ireo mpanao gazety momba ny fanenjehana sy fampitahorana. Tamin'ity taona ity, tamin'ny Andro Manerantany ho an'ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety, nokilasian‘ny Reporters Without Borders ho laharana faha-154 amin'ireo firenena 180 i Azerbaidjàna. Na nihatsara aza ny zavabitan'ilay firenena raha oharina tamin'ny taona lasa, nahazo isa 6, ny lalàna henjan'ny fampitàm-baovao izay niditra hanan-kery tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia hisy fiantraikany ratsy kokoa amin'ny fahalalahan'ny media sy ny fahamaroany.
Amin'izao fotoana izao izay farafahakeliny mpanao gazety efatra no mbola voafonja, ary voasakana ireo tranonkala Web tsy miankina sy mpanohitra, ary manjaka ao Azerbaidjan ny sivana, dia tsy misy antony mihitsy hiravoravoana amin'ity anio ity. Tena vao haingana mihitsy, nipoitra ihany koa tao anaty lisitr'ireo fanadihadian'ny Pegasus ny anaran'ny firenena. Ny mpanao gazety dia anisany tao anatin'ireo mpampiasa izay toa ohatran'ny tratran'ilay rindrambaiko fitsikilovana ny fitaovan-tserasera fitondrany mandehandeha. Araka ny voalazan'ny Reporters sans frontières, nisy ny fakàna am-pitaka manontolo ny fampitàmbaovao ataon'ny Fanjakana. Mazàna ihany koa ireo mpanao gazety no kendren'ireo polisy mandritra ny fivorivoriana sy ny fihetsiketsehana ary voarahona izy ireo raha toa “manadihady ny tsy mety, ny tsy fanarahan-dalàna na ireo heloka bevava mety hitranga amin'ny fitantanan'ny fanjakàna ny krizy ara-pahasalamana”, hoy ny tatitra isantaona nataon'ny Filankevitr'i Eorôpa sy ireo fikambanana mpiara-miasa navoaka tamin'ny volana lasa.
Mialohan'ny Andro Maneran-tany ho an'ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety, ny mpisolovava mpiaro zon'olombelona, Khalid Aghaliyev, izay mitarika ny hetsika iray momba ny zon”ireo mpampahalàla vaovao, nifanakalo hevitra niaraka tamin'ny foibe fanadihadiana Astna momba ny tontolon'ny haino aman-jery ao Azerbaidjàna. Nanambara izy fa tsy ampy loharanom-bola sy rafitra ara-dalàna ny mpiasan'ny haino aman-jery ao Azerbaidjàna sady iharan'ny herisetra tsy mitsahatra ara-batana, ara-tsaina ary tsindry araka ny lalàna, tsy lazaina intsony ireo fanafihana an-tserasera.
Araka ny voalazan'i Aghaliyev, mihahenjana ny toe-draharaha noho ny fankatoavana tamin'ity taona ity ilay lalàna vaovao mahakasika ny haino aman-jery. Ary miteny ho azy ny isa nozaraina momba ireo mpisolovava mpiaro zon'olombelona. Asehon'ny fandraisana andraikitra nataony ny tranga mitontaly 203 nahavoakasika ireo mpanao gazety tamin'ny 2021. Ahitana tranga maromaro ireo zava-niseho ireo – manomboka amin'ny fanakanana an'ireo mpanao gazety tsy hanao ny asany ka hatramin'ny fandrahonana an-tserasera. Nanazava i Aghaliyev fa :
Ny endrika fisotasotàna mateti-pitranga atrehin'ireo mpanao gazety, bilaogera ary ireo mpiasan'ny media ao Azerbaidjàna dia tranga mifandraika amin'ny fampiasana ireo rafitra ara-dalàna na ara-toekarena. Tafiditra anatin'izany ny fanenjehana ara-pitsarana, fanakantsakanana ny fakàna sary sy ny tsy famaliana an'ireo fangatahana vaovao.
Amin'ireo tranga rehetra voarakitra an-tsoratra amin'ilay fandraisana andraikitra mikasika ny zon'ny haino aman-jery, tsy misy na tranga iray aza mampiseho hoe nanenjehan'ireo mpampihatra lalàna ireo izay nanao herisetra tamin'ny mpanao gazety.
“Hitanay ihany koa ny fitomboana be tamin'ny fanafihana tsy ara-batana na fanafihana an-tserasera natao an'ireo media sy ireo mpanao gazety. Tamin'ny taona 2018, 14 tamin'ireo tranga ireo ihany no voarakitray an-tsoratra. Fa tesy ankilan'izay, tamin'ny taona 2021, nisy 59 ireo tranga toy izany”, hoy i Aghaliyev.
Ny taona 2017, nolanian'ny fanjakana ny Lalàna momba ny Fampahalalambaovao, ny famadihana hanarana ny kajimirindra sy ny Fiarovana ireo vaovao ary koa ny Fehezandalàna mikasika ireo Fandikan-dalàna. Namadika tanteraka ny lalàna hiala tamin'ny fandrindràna ara-teknika hankany amin'ny fandindràna ny votoaty ireo fanovàna ireo. Nanomboka teo, im-betsaka no nasiana fanitsioana ilay lalàna, tamin'ny 2020 ny farany akaiky indrindra. Nanomboka teo, nisy fiantraikany ratsy tamin'ny asan'ireo mpanao gazety ireo fanovàn-dalàna ireo. “Hatramin'ny volana Desambra 2021, tranga maherin'ny 10 no nampiharàna ireo fepetra eo ambony ireo. Nanjary lasibatry ny fanenjehana ihany koa ireo mpanao gazety mpitsikera.Tamin'ny taona 2021, nitohy ny fampiharana fanasaziana mpanao gazety mandritra ny fotoana maharitra amin'ny alàlana fiampangana mampiahiahy”, hoy Aghaliyev tamin'ny Astna.
Tamin'ny fiandohan'ity taona ity, lalàna iray vaovao mikasika ny haino aman-jery no nampiditra fameperana bebe kokoa amin'ny fahalalahan'ny haino aman-jery sy ny fahalalahana maneho hevitra ao amin'ny firenena, izay, araka ny voalazan‘i Jeanne Cavelier, filohan'ny birao RSF Eorôpa Atsinanana sy Azia Afovony, dia fanitsakitsahana ny andininy faha-50 amin'ny lalàm-panorenana Azerbaidjan, mikasika ny fahalalahana mahazo vaovao sy ny andininy faha-10 amin'ny Fifanarahana Eoropeana mikasika ny zon'olombelona (CEDH), momba ny fahalalahana maneho hevitra.
Nampidirin'ilay lalàna ihany koa “ny karazany iray midadasika amin'ny fameperana votoaty“, anisan'izany ny:
….fanakànana an'ireo vaovao “fanelezana finoanoam-poana”, ” fanaratsiana ny lazan'ny orinasa iray”, “fanaovana tatitra momba ireo hetsika vonjy taitra ataon'ny miaramila sy fanaovana an-tendro ara-pinoana ary ny fandraràna ny famoahana zavatra azo tamin'ny alàlan'ireo mpandrakitra feo sy fakantsary miafina”
Saingy ireo fitantaràna manokan'ireo mpanao gazety sy ny vokany eny amin'ireo vovonan'ny media no mampiseho ny fomba ataon'ireo rafitra ara-dalàna efa misy mba hampanginana misimisy kokoa ireo matihanina amin'ny haino aman-jery ao amin'ny firenena fa tsy ny hanome hery azy ireo. Vao haingana, tonian-dahatsoratra iray an'ny sehatra fampahalalam-baovao amin'ny tambajotra no nosamborina tamin'ny volana Aprily noho ny fiampagana diso, sady, na dia nafahana aza izy, mitohy ny fanadihadiana mikasika ny heloka bevava lazaina fa fitakiana vola. Tamin'ny volana febroary, nandoa lamandy tamin'ny tribonaly iray teo an-toerana ny mpamorona ny sehatra fampahalalam-baovao amin'ny tambajotra yeniavaz.az, tamin'ny fitanisàna ny tsy nahavitàn'ny mpitantana ilay vohikala nanaisotra ireo votoaty nitsikera navoaka teo amin'ny pejy Facebook-n'ilay tranonkala, araka ny filazan‘ny sampan'ny Radio Liberty ao Azerbaidjan.
Rehefa nihatra ilay lalàna vaovao mikasika ny haino aman-jery, niresaka tamin'ny Jam-News i Ulviyya Ali, mpanao gazety tsy miankina, nilaza hoe :
Nalàna taminay ny zonay hahazo vaovao. Irian’ [ny governemanta] ny mba handrakofanay ny fampiroboroboana amin'ilay fiteny mifanaraka amin'ny tombontsoan'izy ireo sy mifototra amin'ireo fitsipika narafitr'izy ireo. Amin'ny alalan'ny famoronana sakana amin'ny asa am-birao, tsy hanery ny mpanao gazety tsy miankina mba hampiseho ny tena marina izy ireo. Lavinay ny hankato ilay lalàna vaovao mifanohitra amin'ny lalàm-panorenanay ary hanohy ny asanay amin'ny fomba matihanina kokoa izahay, manaraka ny foto-kevitra ary tsy miandany.
Na dia talohan'ny nankatoavana ilay lalàna aza, ny mpanao gazety sasantsasany sy ireo mpampiasa haino aman-jery sosialy dia efa nisantatra sahady ny fampiharana ilay lalàna mikasika ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fahalalahan'ny haino aman-jery. Navoakan'ireo tomponandraikitra ny andiana fampitandremana sy lamandy ho an'ireo tranonkalam-baovao, ho an'ireo mpanao gazety sy mpampiasa ny haino aman-jery sosialy.
Ny Desambra 2021, ny mpanao gazety Sakhavat Mammad, avy amin'ny vohikala Yenicag.az, no voasazy anandritra ny fitsaràna iray tratra alim-be noho ny fiampangàna azy ho namoaka vaovao voarara mahakasika loharanom-baovao iray na tambajotra fampahalalam-baovao/serasera mandika ny Andininy 388-1.1.1 amin'ny Fehezan-dalàna mifehy ny fandikan-dalàna.
Tamin'ny fanasongadinana ireo fepetra fampitahorana sy fandrahonana hafa atao hanoherana ny mpanao gazety ao Azerbaidjan, dia namoaka fanambaràna ny vondrona parlementera iray ahitana ireo solombavam-bahoaka ao amin'ny Antenimieran'ny Filankevir'i Eorôpa, tamin'ny 2 May teo, mba hanomanana tatitra feno iray mikasika ity olana ity. “Tokony hiantso ny Governemanta ny Antenimiera Azerbaijaney mba hanajany ny Fifanarahana Eoropeana mikasika ny zon'olombelona sy hiantohany ny fiarovana ireo mpanao gazety sy ireo mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona, hamela azy ireo hanohy tsy misy sakantsakana ny asany matihanina “, hoy ny vakin’ilay fanambaràna. Araka ny voalazan‘ny Masoivohom-Baovao Turan, ho jeren'ny komity maharitra sy ny Biraon'ny PACE ilay sosokevitra amin'ny tapaky ny volana May.
Na izany aza, na eo aza ireo fanamby eny an-kianja sy ilay lalàna henjana vaovao mikasika ireo haino aman-jery, hitohy hatrany ny ady mba hiarovana ny fahalalahana sy ny fahabetsahan'ny haino aman-jery, araka ny voalazan‘i Samira Ahmadbeyli, mpanao gazety Azerbaijaney. Nambarany tamin'ny Civil Rights Defenders tao anaty tafatafa iray fa mbola tsy vonona ny hitsoaka ady ireo mpanao gazety tsy miankina.